Symbicort vs. Advair - ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇွန်လ 2022
ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ နှိပ်ပါ ပြင်းထန်သောအားကစား ဖျော်ဖြေရေး ရပ်ရွာ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ဆီးဂိမ်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Symbicort vs. Advair - ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Symbicort နှင့် Advair တို့သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ (COPD) ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည့်တံဆိပ် ၂ ခုဖြစ်သည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD အဆုတ်ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်လေကြောင်းလိုင်းအတွက်ရောင်ရမ်းစေတဲ့အခြေအနေများဖြစ်ကြသည်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD ၏ရောဂါလက္ခဏာများအသက်ရှူကျပ်ခြင်း, အသက်ရှူကြပ်ခြင်းနှင့်ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Symbicort နှင့် Advair တို့သည်ရှူရှိုက်မိသော corticosteroid (ICS) ကိုတာတာလုပ်နေသော beta agonist (LABA) နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရှူရှိုက်မိသူများဖြစ်သည်။ အဆုတ်တွင်းရှိရောင်ရမ်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်လေကြောင်းလမ်းကြောင်းများကိုပွင့်လင်းစေရန်အတွက်၎င်းရှူရှိုက်မိသောအရာများကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသို့မဟုတ် COPD ၏ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးရှူရှိုက်သူများအဖြစ်မသုံးပါ။ Symbicort နှင့် Advair တို့သည်တူညီကြသော်လည်းတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောဆေးများတွင်ကွဲပြားမှုများရှိသည်။
Symbicort နှင့် Advair အကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။
Symbicort နှင့် Advair တွင်အဆုတ်တွင်ရောင်ရမ်းမှုများကိုသက်ရောက်စေသော corticosteroid ပါရှိသည်။ Symbicort တွင် corticosteroid budesonide ပါ ၀ င်ပြီး Advair တွင် corticosteroid fluticasone ပါရှိသည်။ Symbicort နှင့် Advair တို့သည်လေကြောင်းလိုင်းများကိုပွင့်လင်းစွာထိန်းသိမ်းထားရန်တာရှည်ခံသော bronchodilator ပါ ၀ င်သည်။ Symbicort တွင် formoterol ပါရှိသည်၊ Advair သည် salmeterol ပါရှိသည်။
Symbicort ကို COPD ကိုပြုပြင်ရန်ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်လူများတွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Advair ကို COPD အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုပြီး ၄ နှစ်နှင့်အထက်လူများတွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုကုသရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Symbicort ၏ပုံမှန်သောက်သုံးသောပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီး Advair ၏ပုံမှန်သောက်သုံးသောပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ရှူရှိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။
Symbicort သည်ရှူရှိုက်မိသော aerosol အဖြစ် ၈၀ / ၄.၅ mcg သို့မဟုတ် budesonide / formoterol ၏ ၁၆၀ / ၄.၅ mcg အစရှိသောစွမ်းအားရှိသောလေဆာအဖြစ်ရောက်ရှိလာသည်။ Advair ကိုရှူရှိုက်မိခြင်းအားဖြင့်လေမှူနှင့်ရှူရှိုက်မိသောအမှုန့်များအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Advair HFA သည်တိုင်းတာသောဆေးထိုးသောရှူရှိုက်မိသောဓာတ်ငွေ့သည် ၄၅/၂၁ mcg၊ ၁၁၅/၂၁ mcg သို့မဟုတ် ၂၃၀/၂၁ mcg ၏ fluticasone / salmeterol အားပြင်းထန်သောရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်လေကိုထုတ်ပေးသည်။ Advair Diskus သည်အားအင် ၁၀၀/၅၀ mcg၊ ၂၅၀/၅၀ mcg (သို့) fluticasone / salmeterol ၅၀၀/၅၀ mcg ရှိသောရှူရှိုက်မိသောအမှုန့်များကိုပေးသည်။
Symbicort နှင့် Advair အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုများ
မူးယစ်ဆေးအတန်း ICS (ရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid) နှင့် LABA (ရှည်လျားသောလုပ်ဆောင်မှုများ beta2-adrenergic agonist) ICS (ရှူရှိုက်မိသည့် corticosteroid) နှင့် LABA (ရှည်လျားသောလုပ်ဆောင်မှုများ beta2-adrenergic agonist)
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Budesonide နှင့် formoterol fumarate dihydrate Fluticasone propionate နှင့် salmeterol
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ နေ့စဉ် ၂ ကြိမ် Symbicort 80 / 4.5 သို့မဟုတ် 160 / 4.5 ကိုရှူရှိုက်မိခြင်း
အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အောက်လူနာများအားပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ နေ့စဉ် ၂ ကြိမ် Symbicort 80 / 4.5 ကိုရှူရှိုက်မိခြင်း
COPD ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှု: နေ့စဉ် ၂ ကြိမ် Symbicort 160 / 4.5 ကို ၂ မိနစ်ရှူရှိုက်မိပါ Advair Diskus
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် Advair Diskus 100/50, 250/50 သို့မဟုတ် 500/50 ကိုရှူရှိုက်မိခြင်း အသက် ၄ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြားလူနာများကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် Advair Diskus 100/50 ကိုတစ်ကြိမ်သောက်ခြင်း COPD ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှု: တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် Advair Diskus 250/50 ကိုတစ်ရှူရှိုက်မိခြင်း
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှု။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် Advair HFA ၄၅/၂၁၊ ၁၁၅/၂၁ သို့မဟုတ် ၂၃၀/၂၁ ကိုရှူရှိုက်မိခြင်း
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ လူကြီးများနှင့်ကလေးများ ၆ နှစ်နှင့်အထက် လူကြီးများနှင့်ကလေးများ4နှစ်နှင့်အထက်
Symbicort နှင့် Advair မှကုသသောအခြေအနေများ
Symbicort နှင့် Advair တို့သည် FDA မှခွင့်ပြုထားသောအပြင်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါနှင့် COPD တို့ကိုကုသရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Advair Diskus သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD ကိုကုသရန်အတွက်ခွင့်ပြုထားပြီး Advair HFA သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုသာကုသရန်အတွက်ခွင့်ပြုထားသည်။ Symbicort နှင့် Advair ကို COPD ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်နေ့စဉ်အသုံးပြုသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုသမှုဆိုင်ရာရှူရှိုက်သူများအဖြစ် အသုံးပြု၍ အသက်ရှုခြင်းနှင့်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကဲ့သို့သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုအသုံးပြုသည်။
ရေရှည်အသုံးပြုပါကဤဆေးများသည် COPD ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါတိုက်ခိုက်မှု သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားစေ။ COPD သို့မဟုတ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၏စူးရှသောရောဂါလက္ခဏာများကိုချက်ချင်းထိန်းချုပ်ရန်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူသည်အယ်ဘူတာရောလ်ကဲ့သို့သောကယ်ဆယ်ရေးရှူရှိုက်မိသူအားညွန်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Ventolin နှင့် ProAir ကဲ့သို့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့်လည်းလူသိများသည်။
အခြေအနေ ကဗျာ အကြံပေး
COPD ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Symbicort သို့မဟုတ် Advair သည်ပိုမိုထိရောက်သလား။
Symbicort နှင့် Advair နှစ်မျိုးလုံးသည်ရှူရှိုက်မိသောအခါရှူမိသောရှူရှိုက်မိသောသူများဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးတွင်တူညီသောတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောရှူရှိုက်မိသည့်ဆေးကိုရှာဖွေရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ပြောဆိုပါ။
အရ meta-analysis သည် , ရှည်လျားသော - ပြုမူ bronchodilator နှစ် ဦး စလုံးတစ်ရှူရှိုက်မိ corticosteroid နှင့်ကြာမြင့်စွာ - သရုပ်ဆောင် bronchodilator နှင့်အတူတစ်ရှူရှိုက်မိပါတာရှည် - သရုပ်ဆောင် bronchodilator သာပါဝင်သောတစ်ခုရှူရှိုက်မိပါက COPD ပိုမိုဆိုးရွားစေလျှော့ချရန်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ Symbicort နှင့် Advair ရှိတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် ဦး ခေါင်းချင်းထိစမ်းသပ်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်လေ့လာမှုအရယေဘုယျအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှူရှိုက်မိသူများသည်အလားတူထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
Symbicort နှင့် Advair ရှိတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ကျပန်းနှစ်ကြိမ်မျက်စိကန်းသောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည် အလားတူတိုးတက်မှုများ အဆုတ် function ကို, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါထိန်းချုပ်မှုနေ့ရက်များနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ -related အရည်အသွေး။ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းကြောင့်ဆေးရုံတက်ရခြင်း (သို့) အရေးပေါ်ခန်းသို့လာရောက်ခြင်းများကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ လေ့လာမှုကိုအသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက် ၂၈၆၆ ယောက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Symbicort နှင့် Advair တို့၏လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Symbicort သည်များသောအားဖြင့် Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုတွင်အကျုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာသောယေဘုယျဆေးတစ်ခုအဖြစ်လည်းရရှိနိုင်သည်။ Symbicort ၏ပျမ်းမျှလက်လီစျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၅၅၀ ခန့်ရှိသည်။ သင်သည် Symbicort ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဖြင့်ငွေစုပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ် SingleCare ကဒ်ကဲ့သို့သောလျှော့စျေးကဒ်ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
Advair သည်ပုံမှန်အား Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Symbicort ကဲ့သို့ပင် Advair သည်ယေဘူယျပုံစံဖြင့်လာသည်။ Symbicort နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Advair HFA ၏လက်လီစျေးနှုန်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၈၄ ရှိနိုင်သည်။ ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းမှာ Advair Diskus ၏ဒေါ်လာ ၄၉၄ ခန့်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သည့်ဆေးဆိုင်များတွင် Advair HFA သို့မဟုတ် Advair Diskus ၏ကုန်ကျငွေကို SingleCare ကူပွန်ကဒ်ဖြင့်သင်သက်သာနိုင်သည်။
ပုံမှန် Medicare copay $ 19- $ 399 $ 2- $ 425
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 248 + $ 288 +
Symbicort vs. Advair ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Symbicort နှင့် Advair နှစ်မျိုးလုံးသည်တူညီသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ nasopharyngitis၊ အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ bronchitis နှင့်နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းစသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ပျို့ချင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊
Symbicort နှင့် Advair ၏ steroid အစိတ်အပိုင်းသည်ပါးစပ်တွင်းထိုးသွင်းခြင်း (သို့) ပါးစပ်မှဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ရှူရှိုက်မိပါအသုံးပြုမှုတစ်ခုချင်းစီကိုအပြီးခံတွင်းကိုရေနှင့်ဆေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပါးစပ် thrush ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချကူညီရန်တစ် ဦး နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုခေါ်ကိရိယာတစ်ခုလည်းမီတာ - ထိုးရှူရှူမိပါရှိသူနှင့်အတူပူးတွဲနိုင်ပါတယ်။
ICS / LABA ဆေးဝါးများ၏ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာဝိရောဓိဖြစ်သော bronchospasm နှင့် anaphylaxis တို့ဖြစ်သည်။ ဝိရောဓိ bronchospasm ၏အကြောင်းရင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ရှူရှိုက်မိသောဆေးကိုသောက်ပြီးနောက်ရုတ်တရက်အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်ချောင်းဆိုးခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ Symbicort သို့မဟုတ် Advair ရှိမည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် Anaphylaxis ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပြင်းထန်သောအဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရှူရှိုက်မိပါကရှူရှိုက်မိပါကအသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းရှိပါကချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၇% ဟုတ်တယ် ၁၂%
နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ဟုတ်တယ် ၁၁% ဟုတ်တယ် *
အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက် ဟုတ်တယ် ၈% ဟုတ်တယ် ၂၇%
ကျောက်ကပ် ဟုတ်တယ် ၅% ဟုတ်တယ် နှစ်ရာခိုင်နှုန်း
နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း ဟုတ်တယ် ၃% ဟုတ်တယ် *
ခံတွင်း thrush ဟုတ်တယ် ၁% ဟုတ်တယ် ၁%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် ၄%
အော့ ဟုတ်တယ် ၁% ဟုတ်တယ် ၄%
ခွံ ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် ၅%
ခါးနာခြင်း ဟုတ်တယ် ၃% ဟုတ်တယ် *
ရင်းမြစ် - DailyMed ( ကဗျာ ), DailyMed ( အကြံပေး )
Advbair နှင့် Symbicort တို့၏ဆေးဝါးဆက်ဆံမှု
Symbicort သို့မဟုတ် Advair ကိုအသုံးပြုသော CYP3A4 inhibitors ဖြစ်သော ritonavir, ketoconazole နှင့် clarithromycin ဆေးများနှင့်အတူသတိထားရန်လိုသည်။ Symbicort သို့မဟုတ် Advair နှင့်အတူ CYP3A4 inhibitor ကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့် corticosteroid အစိတ်အပိုင်း၏သွေးတိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
Symbicort သို့မဟုတ် Advair နှင့်အတူ monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) သို့မဟုတ် tricyclic antidepressants ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် beta-agonist အစိတ်အပိုင်း၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေဆေးဝါးတစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, beta ကို blockers အဆုတ်အတွက် beta ကို - agonist ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများလျော့ကျစေနိုင်သည်။ Symbicort သို့မဟုတ် Advair နှင့်တွဲသုံးသောအခါ diuretics ဆီးသည် electrocardiographic ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ပိုတက်စီယမ်အဆင့် (hypokalemia) ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း ကဗျာ အကြံပေး
Isocarboxazid Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Nortriptyline Tricyclic စိတ်ကျရောဂါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Propranolol Beta blockers ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Chlorthalidone Diuretics ဆီး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Symbicort နှင့် Advair တို့၏သတိပေးချက်များ
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့တွင် corticosteroid ပါဝင်သောကြောင့် Symbicort နှင့် Advair သည်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အရိုးတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆကိုလျော့နည်းစေသည်။ သို့သော်စနစ်ကျသည့် corticosteroids နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရှူမိသော corticosteroids သည်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက်အန္တရာယ်နည်းသည်။ Symbicort (သို့) Advair ဆေးများမြင့်တက်စဉ် adrenal ဖိနှိပ်မှုလည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
Symbicort သို့မဟုတ် Advair ကိုရေရှည်အသုံးပြုခြင်းသည် glaucoma သို့မဟုတ်မျက်စိအတွင်းတိမ်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ ဤဆေးဝါးတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမျက်စိရောဂါလက္ခဏာပြလာပါကမျက်စိအထူးကုဆရာ ၀ န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Symbicort (သို့) Advair ကိုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်မမှန်ခြင်းများ၊ တက်ကြွသောရောဂါများနှင့်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ Symbicort (သို့) Advair မသုံးခင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောသတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ပြောဆိုပါ။
Symbicort vs. Advair နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Symbicort သည် AstraZeneca မှထုတ်လုပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် budesonide နှင့် formoterol တို့ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD ၏လက္ခဏာများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။ Symbicort သည်အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများတွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်လေကိုတစ်နေ့ ၂ ကြိမ်အသုံးပြုသည်။
Advair သည် GlaxoSmithKline မှထုတ်လုပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ fluticasone နှင့် salmeterol ပါရှိသည်။ Advair သည် COPD နှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန် FDA ကိုအတည်ပြုသည်။ ၄ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများအားပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသရန်အတည်ပြုသည်။ Advair သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD ကိုကုသနိုင်သောရှူရှိုက်မိသည့်အမှုန့် (Advair Diskus) နှင့်ရူရှူခြင်းကိုကုသရန်ခွင့်ပြုထားသောရှူရှိုက်မိသည့် aerosol (Advair HFA) အဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးဖော်မြူလာနေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုကြသည်။
Symbicort နှင့် Advair အတူတူလား။
Symbicort နှင့် Advair တို့ကိုပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် COPD ကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်မတူညီသောတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများပါရှိသည် Symbicort တွင် budesonide နှင့် formoterol ပါ ၀ င်ပြီး Advair တွင် fluticasone နှင့် salmeterol ပါ ၀ င်သည်။ Symbicort သည်အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်လူနာများတွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုကုသနိုင်သည်။ Advair သည် ၄ ​​နှစ်နှင့်အထက်လူနာများတွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုကုသနိုင်သည်။ Advair ကိုရှူရှိုက်မိသည့်အမှုန့် (သို့) Aerosol အဖြစ်လည်းရရှိနိုင်ပြီး Symbicort ကိုရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့်လေထဲမှရရှိနိုင်သည်။
Symbicort (သို့) Advair ပိုကောင်းသလား။
Symbicort နှင့် Advair နှစ်မျိုးလုံးသည် COPD နှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရာတွင်ထိရောက်သည်။ သူတို့သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆေးများဖြစ်သောကြောင့်အများဆုံးထိရောက်မှုအတွက်နေ့စဉ်အသုံးပြုသင့်သည်။ အကောင်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှူရှိုက်မိသည့်ဆေးကိုဘေးထွက် - ဆိုးကျိုးများ၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် Symbicort သို့မဟုတ် Advair ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။
Symbicort (သို့) Advair သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းဘေးကင်းသည်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုရန်လုံလောက်သောသုတေသနမရှိပါ။ အမေရိက၏ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်ဓာတ်မတည့်မှုဖောင်ဒေးရှင်း (AAFA) ၏အဆိုအရကြာရှည်စွာဆောင်ရွက်နေသော beta agonists များမှာရှိသည် အားမပေးပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လူနာအတွက်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းကုသမှုအဖြစ်။ အဲဒီအစား, တိုတောင်းသောသရုပ်ဆောင် bronchodilator အစားအကြံပြုနိုင်ပါသည်။ COPD နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးအကြံဥာဏ်များအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ငါအရက်နှင့်အတူ Symbicort သို့မဟုတ် Advair ကိုသုံးနိုင်သလား။
Symbicort (သို့) Advair နှင့်အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းအားလူသိမများပါ။ နာတာရှည်အရက်သုံးစွဲခြင်းသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသို့မဟုတ် COPD ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်သည့်ကူးစက်ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏စွမ်းရည်နှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်။ Symbicort (သို့) Advair ကိုသုံးနေစဉ်အရက်ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းရှိမရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်ပြောဆိုပါ။
အဘယ်ရှူရှိုက်မိခြင်းသည် Symbicort နှင့်ညီမျှသနည်း။
Symbicort ၏ယေဘုယျမူကွဲကိုရရှိနိုင်သည်။ budesonide နှင့် formoterol ပါ ၀ င်သည့်ယေဘုယျမူကွဲသည် Symbicort နှင့်ညီမျှသည်။ ယေဘူယျဗားရှင်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှူရှိုက်မိသူနှင့်ပိုမိုဈေးချိုသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ Symbicort နှင့်တူသောရှူရှိုက်မိပါက Advair (fluticasone / salmeterol)၊ Dulera (mometasone / formoterol) နှင့် Breo (fluticasone / vilanterol) တို့ပါဝင်သည်။ ဤရှူရှိုက်မိသူများသည် Symbicort နှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် Symbicort နှင့်ညီသည်မဟုတ်။
ICS / LABA ပေါင်းစပ်သောရှူရှိုက်မိသည့်ပစ္စည်းများသည် COPD ကိုကုသရန်အတွက်ထိရောက်ပြီးလုံခြုံသည်ဟုယူဆသည်။ သို့သော်ရှူရှိုက်မိသော corticosteroids သည် COPD အဆင့်မြင့်သူများနှင့်အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ LAMA / LABA ပေါင်းစပ်သောရှူရှိုက်မိသူများအားထိရောက်သောဆေးများအဖြစ်သတ်မှတ်သည် ပိုလုံခြုံ ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက် ICS / LABA ပေါင်းစပ်ရှူရှိုက်မိပါထက်။ LAMA / LABA ပေါင်းစပ်သောရှူရှိုက်မိသည့်အင်ဂရာများသည် Anoro (umeclidinium / vilanterol)၊ Stiolto (tiotropium / olodaterol) နှင့် Bevespi (glycopyrrolate / formoterol) တို့ပါဝင်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိတ်ကြွရောဂါ (လူ) မည်မျှရှိသည်